Uxabisa malini umhlaba kwisixeko sakho? -Izixhobo zeGeofumadas
NgoSeptemba, 2018 cadastre, Geospatial - GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Umbuzo obanzi kakhulu onokubangela iimpendulo ezininzi, uninzi lwazo luneemvakalelo; izinto ezininzi eziguquguqukayo nokuba ngumhlaba ngaphandle okanye ngaphandle kwesakhiwo, izixhobo okanye indawo yesiqhelo. Ukuba bekukho iphepha apho besinokulazi ixabiso lomhlaba kwindawo ethile yesixeko sethu, ngokungathandabuzekiyo iya kuba luncedo olukhulu kwimicimbi enxulumene ne-cadastre, intengiso yezindlu okanye ucwangciso lokusetyenziswa komhlaba.
Ukuza kuthi ga ngoku ndichukumisekile linyathelo «Imephu yeMilinganiselo yeMhlaba kwiLatin America«, Efuna le njongo, phantsi kwendlela yokusebenzisana kunye nokusebenzisa itekhnoloji yewebhu. Kusenokwenzeka ukuba izakuphelela ekubeni ngumlinganiso kwimeko yeLatin American, ubuncinci kwizixeko ezibaluleke ngakumbi, ngakumbi ngenxa yendlela yokuthelekisa phakathi kwemimandla namazwe.
Kuhlelo 2018 esilishumayelayo ugqibo oko yaqala kwiminyaka emibini eyadlulayo: a systematization yeenqobo yemihlaba esezidolophini izixeko ezahlukahlukeneyo Latin American ukuba imarike elinoxanduva entengo. Ngeenkcukacha, kwaye yokuba unako ukuvelisa ikratshi ethile okanye nokunconywa, kukuba linyathelo intsebenziswano ngokupheleleyo. Ukuthatha inxaxheba kuzo zonke iintlobo zamavolontiya abanikela isiqwenga esinceda ukugqiba le ipuzzle ngamanye amaxesha kubonakala ngathi kwimida yezoqoqosho zelizwe lethu. Uvulo lujoliswe kubantu abadibaniswe nabafundi, abaqeqeshi, abameli bezindlu kunye namaziko karhulumente, kunye namaziko karhulumente kunye namaziko abucala anxulumene nokulawulwa kwemigaqo-nkqubo yomhlaba. Kukhululekileyo kunye nokuzimeleyo kwanoma yimuphi umdla wezoqoqosho okanye wezopolitiko onokubeka uxinzelelo kubaququzeleli okanye ukuma kwabo xa bebeka amanani athile.
Le projekthi ibalwa ezimbini ezimbini zangaphambili, enye kwi-2016 enye enye kwi-2017. Ndiyabulela kule mi sebenzi, i-7,800 idatha ye-georeferenced data esuka kumazwe e-16 eyahlukileyo ukusuka kummandla iqokelelwe.
Kubaluleka kokwazi ukubaluleka komhlaba
Ejongene nale ntsha, kuphakanyiswa imibuzo ngenxa yoko kuyimfuneko okanye apho kuya kuba luncedo ukwazi ukuba umhlaba ungakanani kwindawo ethile. Ubukho bebhanki yolwazi kulo mbandela lunokunceda ukudibanisa imilinganiselo xa uhlela imigaqo-nkqubo yoluntu kunye nokwandisa isicwangciso esithile solawulo lwemihlaba ebalulekileyo kwizixeko ezikuloo ndawo. Umlinganiselo wesicwangciso sezidolophini, njengeqela lezindlu zentlalo, uya kufumana umgaqo ophezulu xa kuqhutywa kumazwe athile phantsi kwemithetho ethile; Ukungathethi iiprojekthi ezibandakanya ukuhluthwa, ukulungiswa kunye nokuhlawulelwa.
Enye yezinto ezibalulekileyo zeprojekti yinto enokwenzeka ukuba inani elikhulu labantu linikeza inkululeko yedatha kwi-intanethi.
Sivile kakhulu malunga crowdfunding njengendlela yokuphakamisa okanye yokutyalwa kwiprojekthi ukwenzela ukuba ibe yenziwe. Bangabantu, iinkampani okanye amaziko afaka imali ukuze omnye aqhubeke kunye neenjongo zawo, asebenzise inzuzo yewebhu. Nge izihlwele umbane olinganayo owenzekayo, umlinganiselo kuphela owenzelayo awuyiyo imali kodwa idatha okanye ulwazi kwaye utshintshe lowo ohlawulela ulwazi kwingxenye ebambisanayo yeprojekthi. Inguqulelo inokuqondwa ngokuthi "intsebenziswano yobuninzi". Kungokuthi, ngendlela yokwenziwa, inxaxheba enkulu, ehlala ikhululekile, evulekile, evulekile kwaye efikeleleka kalula, kwaye kugxininiswe kwi-geolocation iphelile ekuqeshweni kwekota i-crowdmapping.
Imisebenzi emine enokunikezelwa kwesi sixhobo
Umsebenzi wokuqala unikezwa ngombono wezemfundo. Ingasetyenziselwa njengoluhlu oluchanekileyo nolwazi oluchanekileyo xa kudala amanani amanani. Ngokomzekelo, ithuba lokufikelela kwikhaya lungaba ngumbandela omele uthathelwe ingqalelo xa uhlalutya umgangatho wobomi bomntu othile; Ukuba sinendawo yedatha edibeneyo ngasentla, sinokuqhathanisa umgangatho wokuhlala phakathi kwabemi baseBuosos Aires ngokungafani nakwezinye iidolophu zaseArgentina, ukubiza igama.
Enye indawo enokusetyenziselwa le mephu yexabiso yecadastre yezemali. Rhoqo ngonyaka oorhulumente basekhaya bafuna idatha yentengiso ukuze bahlaziye amaxabiso emimandla yezoqoqosho, ekufuneka uvavanyo luhlaziywe kunye neerhafu eziqokelelweyo. Ngokwesiqhelo oku kufuna ukubonisana nexabiso leenkampani ezithengisa izindlu, ukuthengisa okuthembekileyo kwiRegistry yePropathi, izibhengezo zentengiso kumajelo eendaba, njl. Ewe lo ngumthombo ofanelekileyo woku; Ayizothusa into yokuba abasebenzi bakamasipala abasokolayo yile ngxaki bahlaziya idatha yabo apha ukuze bangashiywa ngaphandle kwinto eyenziwa ngabanye ukwenza uphando lwabo. Ndimele ndicacise ukuba la maxabiso ngamaxabiso entengiso kwaye abhekisa kumhlaba kuphela, awabandakanyi ixabiso lesakhiwo.
Indlela yesithathu inxulunyaniswa naleyo yangaphambili, kodwa phantsi kwendlela yokuhamba kweemarike; ngakumbi kuba ngokujonga nje kwimephu kunokwenzeka ukumisela ukuba yeyiphi indawo yedolophu eyona nto ihambisa kakhulu; Kungcono okanye kubi, olu lwazi lunokuba luncedo kwanokukhuthaza utyalomali okanye ukuchonga ulwazi olungachazwanga. Isiseko solwazi sinokukhutshelwa, kwaye idatha ibandakanya iinkcukacha ezinokusetyenziselwa ezinye iinjongo, ezinje ngoluhlu lwendawo yeqashiso, iinkonzo ezikhoyo, umthombo wedatha kunye nomsebenzisi oyinikileyo.
Ekugqibeleni kwaye mhlawumbi isuntswana ngakumbi kwinqanaba ndinamaphupha, ezi zixhobo bakhonza ukuqhubeka kususwe nemiqobo. Nangona jikelele, iphenjelelwa Internet ezintsha iintlobo zonxibelelwano, ehlahla indlela kakhulu Iiprojekthi ngathi imephu amaxabiso umhlaba Latin America negalelo ekuqiniseni amaqhina phakathi kwabantu beentlanga ezahlukeneyo edityaniswa yokuziqeqesha efanayo .
Ukufezwa kwale projekthi kunelungelo kumaphulo I-Lincoln Institute of Policy Land efuna ukwandisa inxaxheba kunye nobukho kwiLatin America naseCaribbean ngokusebenzisa ukuphuculwa kwamaphulo ezemfundo nezenzululwazi kunye neentlobo ezahlukeneyo zokupapashwa kweeprojekthi.
Bona iphepha leemaphu leemaphu
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Wms2Cad-iinkonzo zonxibelelwano ze-wms kunye neenkqubo ze-CAD
Post Next Eyona nto ibalaseleyo ngeSoftware yoKwakha-Amabhaso oKwakha eComputer ka-2018Okulandelayo »